प्रचण्डलाइ अचम्म पार्ने गरि ओलीले गरे यस्तो प्रस्ताव ! « Etajakhabar
प्रचण्डलाइ अचम्म पार्ने गरि ओलीले गरे यस्तो प्रस्ताव !
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार ०९:१४
काठमाडौं । शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ– कतै एकता भत्किने त होइन ? नेकपा फेरि फुट्ने त होइन ? मेलमिलापको अपेक्षासहित दुई अध्यक्ष एक–एक विश्वासपात्रसहित शुक्रबार तीन घण्टा बसे। जति बसाइ लम्बिँदै गयो, शुभेच्छुकको आशा बढ्दै गयो। तर, छुटुन्जेलमा मन त माझियो। कुरा बाझिएरै रह्यो।
‘दुई अध्यक्षबीच खुलेरै कुराकानी भएको छ’, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा सँगै रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘तर, विषयवस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन। अर्को राउन्ड फेरि छलफल हुने भएको छ।’ छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि थिए। उनले पनि सञ्चारमाध्यमलाई ओली र दाहालबीच खुलस्त कुराकानी भएको र आफूलाई लागेका कुराहरू दुवै अध्यक्षले राखेको जानकारी गराएका थिए। ‘सम्बन्ध नट गुड, नट ब्याड (न राम्रो, न खराब) भयो’, बैठकको उपलब्धिबारे बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
त्यति मात्र होइन, दाहाललाई ओलीले शुक्रबारको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा आफ्नो टिममध्ये कुनमा बस्ने रोज्नसमेत आग्रह गरेका थिए। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरा भएन, अर्काे एउटा पनि निर्णय गर्नुहोस् तपाईंले मेरो टिममा बस्ने हो कि माधव नेपालको टिममा बस्ने हो ? फैसला गर्नुहोस्सम्म मलाई भन्नुभयो’, ओलीले आफूलाई राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै दाहालले ब्रिफिङमा भने। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
२६ श्रावण २०७७, सोमबार १५:२८
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:५८
२८ सयको तकिया खोल र ८ हजारको तन्ना भएकाे क्वारेन्टिनकाे अवस्था विजोग
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:५०
उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन थालेपछि पहिलोपटक सरकारले थाल्यो यस्तो पहल
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:४२